I-Sunset Ridge Lake Home enembonakalo e-Yankton - I-Airbnb
I-Sunset Ridge Lake Home enembonakalo e-Yankton
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLaurie
Yonwabela indalo kunye namachibi kwikhaya lethu elineendawo zokuhlala ezinkulu eziyi-2, amagumbi okulala ayi-4, kunye neveranda enkulu ehloliweyo. Indawo eninzi yokudibana kufutshane nendawo yomlilo okanye udlale umdlalo wevidiyo/imidlalo yebhodi, i-ping-pong, okanye ubukele iimuvi kwi-70-inch TV kwi-loft. Indawo enkulu yangaphandle yokupaka, izinto zebhedi ezininzi nekhitshi elinento yonke. Ukufikelela kwi-intanethi okukhawulezayo okuhlaziyiweyo ngoAprili 2022. Buza malunga nokufikelela kwisikhephe sethu kwi-marina ezayo ngoMeyi ka-2022. Yenza iinkumbulo apha!
Amagumbi okulala amane aneebhedi ezinkulu kunye neebhedi ezikhweleneyo kwelinye lamagumbi okulala amakhulu akwinqanaba elisezantsi kunye nefuton enokulala abantu ababini nangaphezulu kwiloft enokulala abantu ababini. Izinto ezongezelelekileyo ezininzi ezifana nezinto zokudlala zaselwandle/iiflethi, zabantwana kukho isitulo esiphakamileyo esiphathwayo, ibhedi yosana ephathwayo, isithuthuthu esijingayo, kunye nesitulo esincinci, kunye nezinto zokudlala. Imidlalo yebhodi eyahlukahlukeneyo kunye neepikniki, kwaye kukho ichibi elinonxweme, idokhi yesikhephe, kunye negalufa yemizuzu emihlanu xa uqhuba i-bluff.
70" HDTV ene-I-Roku
Uya kuziva ngathi ukude kuyo yonke into kuba isekupheleni kwe-cul-de-sac. Ikhaya lethu livaliwe, kodwa yimizuzu emihlanu ukusuka kwindawo yolwandle kunye nenqanawa yesikhephe kunye nemizuzu elishumi ukusuka eLewis naseClark Marina, iindawo zokutyela, kunye nemisebenzi eyonwabisayo.
Ifumaneka ngeteksti nangaliphi na ixesha kwaye inokuza ukusombulula ingxaki ukuba kuyimfuneko.